Giya mota yekutengesa, magiya madiki anotengeswa, geji dc mota, hydraulic gear mota, simbi magiya anotengeswa, simbi magiya anotengeswa
K akateerana helical gear spiral bevel gear kuderedza (giya yekugedhesa, yakanyanya kutumira zvinobudirira), Bevel gear mota ndiyo mhando yeanoda geti gear. Iyo inokosha getsi mota kune dzakasiyana siyana zvinogadzirisa. Giya rayo rinotora Gleason quasi-hyperbolic gear rudzi, uye giya rakaoma mazino kumusoro. Iyo ine yakakura kubereka mutengo uye yakaderera ruzha. Hupenyu hurefu, kushanda kwepamusoro, kushanda kwakasimba, nezvimwewo, kuita kwemuchina wese kwakanyanya nani kupfuura iyo cycloid minimer mota uye nehonye giya rekudzora mota, yakave ichizivikanwa zvakanyanya nekushandiswa nevashandisi. Iyo geared mota inotyairwa neV-bhandi. Iyo mota inotyairwa nebhandi kuti ityaire iyo yekuisa chikamu. Iyo fekitori ine yakajairika V-bhandi. Kana uchishandisa mota yekuputika-proof mota, anti-static V-bhandi (mushandisi-yakagadzirirwa) inofanira kushandiswa.
1. K inoteedzera giya mota inogadzirwa zvinoenderana nenyika dzekunze zvemitemo uye ine yakakwirira yesainzi uye tekinoroji zvinhu.
2. Iyi nhevedzano yegetsi mota inosevha nzvimbo, yakavimbika uye yakasimba, uye iine huwandu hwakawandisa hwekuremerwa, uye simba rinogona kusvika kupfuura 200KW.
3, kuderedzwa kwesimba kushandisa, hukuru hwekushandisa, getsi mota inoshanda inosvika 95%.
4. K akateedzereka spiral bevel giya mota ine yakadzika vibration, ruzha ruzha uye yakakwirira simba kuchengetedza.
5, sarudza yakanakisa 20CrMnTi zvinhu, uye mushure mekuraradza nekudzima kupisa kurapwa, huso hwakaomeswa hunogona kusvika 58-62HRC, iyo yekukuya mazino mashandiro, iyo chaiyo inogona kusvika kune 5-6, ine yakakwirira yekugadzirisa chaiyo, yakagadzika kutapurirana, diki diki inotakura kugona, Hupenyu hurefu uye humwe hunhu.
6. Mushure mekunyatso machining, iyo giya mota inogadzira iyo helical giya, bevel giya uye bevel giya rekufambisa gungano rakagadzirirwa nemhando dzakasiyana dzemota kuti dziite electromechanical kubatanidzwa, iyo inovimbisa zvizere hunhu hwemhando yeiyo geared mota zvigadzirwa.
Sogears Motors uye Jenareta inopa huwandu hwakawanda hwakavimbika uye hwepamusoro mhando uye hwakabatanidzwa nemagetsi mota uye magenerator akagadzirirwa kushanda zvakapetwa zvisinei kuti ndeupi mhando wekupinza. Sogears Kukosha Vanopa vanopa chakabvumidzwa chekutengesa, kutsigira, sevhisi.
Yekukurumidza mwero huwandu: basic 5.36 ~ 197.37, K dzakateedzana / R mutserendende musanganiswa unogona kusvika 32625
Torque mhando: 200 ～ 50000 Nm
Uwandu hwemagetsi: 0.18 ~ 200 kW
K-shaft kuwedzera, tsoka inokwidza KA-shaft inokwira
KF-shaft kuwedzera, flange kumisikidzwa KAF-shaft yakakwira, flange kukwira
S- inoratidza axis yekuisa. Iyi nhepfenyuro yakafanana ne S mfululizo giya mota uye inogona kushandiswa nenzira dzakasiyana. Nekudaro, pasi peiyo mamiriro eiyo imwechete yekumhanyisa muyero, iyo simba rakaenzana uye yakaenzana nhamba yenhamba, iyo yekuburitsa torque yeK kiyi yakakura kupfuura yekuburitsa torque yeS S Series gear mota.
Mhando huru dzeK dzakateedzana magiya motors ndeaya: K / KA / KAF37, K / KA / KAF47, K / KA / KAF57, K / KA / KAF67, K / KA / KAF77, K / KA / KAF87, K / KA / KAF97, K / KA / KAF107, K / KA / KAF127, K / KA / KAF157, K / KA / KAF167, K / KA / KAF187
1.Harbor uye kutumira
2.Hoist uye kutakura
5.Cement uye kuvaka
6.Pare uye yakajeka indasitiri
7.Chemical indasitiri uye kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza.Etc.
Kugadziriswa kwebevel gear mota
Iyo bevel gear yekuderedza mota inogona kukamurwa kuve meno akajeka, mazino anotsvedza uye mazino akakomberwa zvichienderana nechimiro chemutsara weino; mazino akakomberedzwa akapatsanurwa kuita arc mazino, akareba ekunze cycloidal mazino (anonzi cycloidal mazino) uye quasi -ngoute mazino. Kunyangwe zino rehena rakakura mbichana pane zino rakatwasuka, rinonzwa zvakanyanya pakukanganisa, saka zvishoma nezvishoma rinotsiviwa nezino rakakombama. Quasi -ngoute bevel magiya ane tapered hobs haana kuderera mukukwikwidzana neamambo arc mazino uye cycloidal bevel magiya nekuda kwezvinhu zvakaomarara uye zvakaoma kudzora nzvimbo yekusangana yezino rezino. Vakabviswa uye havana kuunzwa kuChina. Rudzi rwemuchina wegiya wekugaya.
Tsvaga helical bevel giya mota inowedzera 1/2 HP, 3/4 HP, 2 HP magetsi emagetsi ari kutengeswa kubva kuChina inozivikanwa brand inogadzira sogears uye ine 1 / 3HP Reliance Duty-Master mota ine Gear Reducer ratio ye40: 1. Iyi diki-saizi giya mota dzakateedzana ine mota inokwana 4kW-250kW Cherechedzo maererano nechigadzirwa kugumiswa: Tiri kurega kutengesa kwemamwe mamodheru K akateedzana ari kutengeswa. Mukubatana neakananga akakwenenzverwa AC motors iwo sogears Modular akagadzirirwa mota sisitimu inogadzira compact drive kune akasiyana mafomu ekushandisa.
Maitiro eiyo bevel gear mota ndeye K-shaft kuwedzera, kutsika tsoka, KA-shaft inokwenenzverwa, KF-shaft yekuwedzera, flange kukwira, KAF-shaft kukwira, flange kukwira, KS- inoratidza shaft pombi Kumirira,
Yayo technical parameter inowanzo:
Simba: 0.12KW ~ 200KW
Torque: 10N · m kusvika 58500N · m
Kumhanya kwekunze: 0.08 ~ 263r / min
Iyi 10-120: 1 giya bhokisi ine mota yemagetsi ine yakaderera-mota mota uye inopa simba uye kumhanya kunoenzaniswa neRC servo pane chikamu chemutengo.
K dzakateedzana helical-bevel giya mota, Yakaderera mutengo AC giya mota & torque mota ine gearbox, 3, 5, 6, 200 21 akasiyana marudzi eiyero reshiyo iwe yaunosarudza. Iine 20 KW simba uye 1350 rpm yakatarwa torque. Takatsanangura musiyano wekumhanya pamotokari pakati pe AC neDC motors uye nzira dzavanoita torue. Iine A gearbox - neimwe nzira inozivikanwa senge giya rinodzora kana kumhanyisa kudzora, ine mota yemagetsi, magiya, uye mabheyaringi mudzimba uye inowanzo shandiswa mukushandisa inoda huwandu hwesimba (torque).
The helical-bevel giya mota, inozivikanwawo seye K-series anoderedza, iri muchimiro chetatu-nhanho chinotakura chinosanganisira maviri seti yemagiya anokosha uye seti yemigero yevelvel. Mhando iyi yekutapira ine yakanyanya kushanda, yakanyanya kuomarara, yakakwirira torque, yakasimba inobereka huwandu uye yakaderera ruzha. Inogona kufananidzwa ne servo mota uye kushanda nematatu-chikamu asynchronous mota. Iyo servo minimer helical gear minimer inogadzirwa nekambani ine hupenyu hwakareba hwekushumira uye torque hombe.
Gear Motors inogadzirwa mumatatu akateedzana emamodeli ane ekuchinjisa anotarisana nemubato uye Yedu yakasarudzika giya zino dhizaini uye yekuteedzera mabhenefiti inopa yakanyarara, kumeso kushanda kune chero simba uye chiyero. Rubatsiro runogara ruripo kubva kune yedu vatengi sevhisi, kutengesa.
Inoshandiswa kwazvo mumachina ezvekudya, michina yekudhinda, michina yesimbi, waya uye tambo yemichina, michina yekufambisa, michina yemakemikari, machira emachira, kudhinda nekucheka makina nemuchina wemishonga.
Yedu sogears brand Gear Motors kubva kuSplus Kutengesa kwemugadziri zvakananga. AC uye DC giya mota, dzakaenderana, dzinodzoserwa, giya mota yekumisikidza ndiro. 1.9 RPM 115 Volt AC 100 mu-lb Sogears Gearmotor. Item Nhamba: 5-1820-2 5 MuStock. Tenga Gear mota nemutengo wakanakisa muChina kana India kubva kuSogears. Huge renji yeGeared Motors mudura redu, Wholesale Mutengo uye Mahara Kutumira.
Kune Sogears 'Sub-Fractional Gearmotors. edu maVFD matsva anotendera magemotori akaverengerwa mumachini anowanzo kuwanikwa munzvimbo dzakasiyana siyana dzekumhanya. Motor & Gear Injiniya, isu tanga tiri wepasi rose mutungamiri mukugadzira, mainjiniya uye kugadzirwa kwemagiya uye shafts. Kutengesa uye Kugadzirisa kweMagetsi Motors uye Drives.
Iyo cycloidal bevel gear inogadzirisa inotora mazino e contour, uye kukwirira kwezino panguva imwe neimwe parutivi rwe indexing cone kunogara; iyo spur, helical uye spiral bevel gear inogadzirisa inotora mazino ekugadzirisa, kubva kumagumo makuru (ekunze kumagumo) kwemeno. Parutivi rwe indexing cone busbar kune iyo diki yekupedzisira (yomukati kupera) kwezino, kukwirira kwezino kunopera zvishoma nezvishoma.
Sogears AC Gearmotors anowanikwa mune akasiyana ma torque anotangira kubva pa15 kusvika 1827 mu-lbs mune ese ari maviri kona uye yakafanana shaft dhizaini neindasitiri. OUR Gearmotors & Yekumhanyisa Reducers Ekutengesa kune pasirese, NEW Oriental mota 1/19 HP Imwe Chikamu Phase Gearmotor. Inventory: GEA2049. Ratio ku1: 0. Mugadziri: sogears.
Iyo yakananga bevel gear yekuderedza mota ine diki axial simba uye nyore rutsigiro system; zvisinei, iyo danho rekubatana idiki, kukanganisa iko kunonzwika, uye ruzha rwacho rukuru. Kazhinji anoshandiswa kupembera kweanomhanya mhanyisa senge dzemotokari kusiyanisa uye inorema michina magiya.
Kuenzaniswa neyakavaira magiya uye helical bevel magiya, iyo curve bevel magiya ane huwandu hwakawanda hwechiitiko, uye mazino epasi pekutarisana nzvimbo ane yakakura yakaenzana radivol; iyo nzvimbo yemazino ekubata nzvimbo zviri nyore kudzora; havana hanya zvakanyanya nekutadza. Nekuda kwechikamu chakakura chekutakura, chinotakurika chikagadzikana uye ruzha rwakaderera. Kazhinji anoshandiswa mukutumirwa senge iyo yepakati kutyaira kwakasiyana mota, matirakiti uye helikopta.
Panobuda Flange Dia. (Mm)
Inobvumidzwa Torque (Nm)
1. Vertical kuburitsa, compact dhizaini, yakakwirira torque kuendesa pane akaoma mazino nzvimbo, yakakwirira chaiyo usahihi giya inovimbisa kushanda yakagadzikana, yakaderera ruzha uye hwakareba hupenyu hwehupenyu.
2, yekuisa nzira: tsoka yekuisa, hollow shaft kumisikidzwa, flange kuiswa, torque ruoko kumisikidza, diki flange kumisikidza.
3. Input mode: mota yakananga kubatana, mota bhandi yekubatanidza kana yekuisa shaft, coupling flange poda.
4. Output mode: hollow shaft kuburitsa kana yakasimba shaft kuburitsa, iyo average average is 94%.
5, uye iyo R yakateedzera kusanganisa inogona kuwana yakakurumidza mwero.
Mune akakura emabhiza gearmotors, mota, yakafanana shaft gearmotors, uye mota dzinomhanyisa mota, isu tinogona kutsiva 90V kana 180VDC gearmotors inotengeswa nema sogears, Kana iwe ukadana kune sogears Electric wedunhu rekutengesa maneja kupindura yako, isu tinopindura.
Sogears Electric Motor inoshanda mukutengesa nekugadziridza kwemagetsi mota, mapombi, kuendesa magetsi, uye zvine chekuita nemidziyo maindasitiri.
Kushandiswa kwebevel gear mota:
Iri kuoneka zvakanyanya mumaitiro ekuparadzira emhando dzakasiyana-siyana dzemakina, kubva kuzvikepe, mota, mota dzemagetsi, michina inorema yekuvaka, kugadzirisa michina uye zvigadzirwa zvemagetsi zvekugadzira zvinoshandiswa muindasitiri yemuchina, kusvika kune zvakajairika muhupenyu hwedu hwezuva nezuva. Midziyo yemumba, wachi, nezvimwewo. Maitiro ayo anotangira kubva kune yakakwira-simba kutakura kuenda kumitoro midiki, yakajeka angular transmit, uye mumaindasitiri maapplication, geared motors ine kuora uye kuwedzera torque. Naizvozvo, inoshandiswa zvakanyanya mukumhanyisa uye michina yekushandura torque. Bevel gear mota ndeye ekunze meshingosvaute helical gear mota inogadzirwa nenyika dzenyika standard ZBJ19004. Inoshandiswa zvakanyanya simbi, kuchera, kusimudza, kufambisa, simenti, kuvaka, makemikari, machira, kudhinda nekucheka, zvemishonga nezvimwe. munda.
Kunyangwe 250 HP Electric Motors isu tinogona kusanganiswa neyedu magiya mota uye iri kutengeswa. Semutengesi wepasi rese wemota, isu tinopa akasiyana marudzi e AC Motors uye DC Motors anosanganisira Traction Motors, Horizontal uye yakatwasuka mhando. Kununura chero kupi kunobva pasirese kubva kuChina, Sogears Direct inopa yakanakisa sarudzo uye ruzivo rwemagetsi emagetsi, eparutivi zvikamu, mageard mota uye zvishongedzo kuti uwane ivo zvavanoda.